Ukukhishwa kwe-hemp usebenzisa imishini yokukhipha i-solvent solvent kuyindlela elula, engambi eqolo futhi esikali kakhulu yokukhipha i-CBD kusuka ku-hemp. I-Ultrasonic hemp extractors kulula ukuyifaka futhi ingasetshenziswa ekukhiqizeni i-batch noma emgqeni ku-throughput. I-Ultrasonics iqinisekisa ukuthi uthola isivuno esikhulu kakhulu se-hemp.
Uwoyela we-Hemp noma uwoyela we-CBD konke ukufutheka ngezinzuzo zawo zezempilo ezehlukile. Indlela yokukhipha kanye nemishini, esetshenziselwa ukuhlukanisa ama-cannabinoids esitshalweni se-hemp, kuthonya ikhwalithi nokukhiqizwa kwamafutha e-CBD kakhulu.
I-Hemp ne-Hemp Oil Extraction
Isitshalo I-cannabis sativa ihlukaniswa ngezinhlobo ezimbili eziyinhloko, i-hemp nensangu. Zombili ziqukethe i-CBD (cannabidiol) ne-THC (tetrahydrocannabinol). I-CBD yaziwa kakhulu ngemiphumela yayo yezokwelapha ezuzisayo, esebenza ngokulwa nokuvuvukala kanye nokulwa nokukhathazeka, kanti i-THC yaziwa kakhulu ngamakhono ayo okusebenza kwengqondo, okubangela lokho okubizwa ngokuthi 'phezulu'. IHemp iqukethe iphesenti eliphakeme kakhulu le-CBD, kuyilapho i-THC itholakala kuphela kumanani wokulandela. Lokhu kwenza ukuthi i-hemp ibe ngumthombo oqagulwe ngaphambili ukukhiqiza izithombisi ezisezingeni eliphakeme ze-CBD, ngenxa yalokho ezaziwa nangokuthi ama-hemp extracts. I-CBD ayidali “phezulu” imiphumela, kepha ukusetshenziswa kwayo kungaba nemiphumela yokuphumula futhi kunciphise ukukhathazeka nokudangala.
Ukukhishwa kwe-Hemp kucebile kuma-cannabinoids anjenge-CBD ne-CBG kanye ne-terpenes – izinto, ezaziwa ngemiphumela yazo emihle empilweni nasenhlalakahleni. Izikhombi ze-Hemp ziqukethe izinto ezingasebenzi kakhulu ngengqondo. I-THC, eyaziwa ngemiphumela yayo esebenza ngokusebenza kwengqondo, itholakala ku-hemp ekugxilweni okuncane okungaphansi kwama-0.3%. I-THC ekumugqeni ophansi onjalo ayibonakali futhi ayakhi imiphumela ebonakalayo emzimbeni womuntu.
I-CBD ingelinye lama-phytochemicals amaningi esitshalweni se-hemp. Lezi zingxube ze-phyto zihlanganiswa emangqamuzaneni eziluhlaza zesitshalo. Ukuze ukhiqize ukukhishwa kwe-hemp njengamafutha e-CBD, ama-tinctures, ama-capsule, ama-lotion, okhilimu noma okunye ukwenezela, i-CBD kumele ikhishwe futhi ihlukaniswe. Ukukhipha ama-cannabinoids abalulekile njenge-CBD, i-CBG ne-terpenes kusuka ku-hemp, inqubo yokukhipha iyadingeka. Izikhipha ze-Hemp zingakhiqizwa ngezindlela ezahlukahlukene njengokukhishwa kwe-ethanol, ukukhishwa kwe-hydrocarbon, noma i-supercritical CO2 isizinda. Indlela esebenza kahle kakhulu, esheshayo, ephephile futhi esebenza kalula yokususa i-hemp iyona isizinda se-ultrasonic.
I-UIP4000hdT – Ama-4000 watts anamandla we-hemp khipha uwoyela
Izinzuzo ze-Ultrasonic Extraction of Hemp
akukho ukuchithwa okushisayo
Inqubo yokukhupha Amafutha ye-Hemp
Amafutha we-Hemp noma i-cannabis igama elivame ukusetshenziselwa uwoyela we-CBD ohlukanisiwe ovela esitshalweni se-hemp noma se-cannabis, ngokulandelana.
Kunezinhlobo ezimbili zokukhiqizwa kawoyela ze-CBD, okuholela emikhiqizweni emibili ehlukene. Kokubeka eceleni i-CBD kuphela ukukhiqiza i-CBD eyedwa. Olunye uhlobo lokukhiqizwa kwe-CBD lubangela i-CBD ebonakalayo egcwele noma ebanzi. I-CBD enesimo esigcweleyo ikhiqizwa isuka kumaqabunga e-hemp, isiqu, noma izimbali futhi inikeze uwoyela omsulwa oqukethe isibuko esigcwele sawo wonke ama-cannabinoids nama-terpenes esitshalweni se-hemp. Amafutha e-CBD agcwelegcwele anenzuzo yalokho okubizwa ngokuthi yinkuthazo. Umphumela wokuncenga uchaza ukuhlanganiswa kokunye okuningi kwama-cannabinoids ngaphandle kwe-CBD. Ukukhishwa kwamafutha e-CBD egcwele kahle imvamisa kuyinqubo ekhethwayo, ngoba ukukhipha okugcwele kwe-spectrum kuqukethe hhayi kuphela izinzuzo ze-CBD kepha futhi nakho konke okunye okutholakele esitshalweni.
Izithako ze-Ultrasonic hemp zingasetjenziselwa ukwenza zombili izinhlobo zamafutha we-CBD, iziqukathi ze-CBD kanye namafutha we-CBD agcweleyo.
Izindlela ze-Hemp Amafutha Okukhishwa Nezisetshenziswa
Kwenziwa kanjani uwoyela we-CBD? Ukuze ukhiphe uwoyela we-CBD esitshalweni se-cannabis noma i-hemp, ama-cannabinoids anjenge-CBD ne-CBG kumele akhishwe ku-matrix yeseli yezinto ezibonakalayo ze-hemp. Kunezinhlobo eziningi zamandla okukhishwa okukhishwa. Izikhipha ethandwa kakhulu i-hemp izikhiphi ze-LGD ezikhipha, isizinda se-supercritical CO2, isizinda se-hydrocarbon, kanye nokukhishwa okujwayelekile kwezixazululo (isib. Ethanol, methanol). Isizinda se-Ultrasonic hemp sinenzuzo eqinile yokuthi ubuchwepheshe be-sonication bungasetshenziswa ngezinto ezihlukene ezibandakanya amanzi, i-ethanol, amanzi / i-ethanol mix, i-glycerine, uwoyela wemifino njll. Lokhu kunikeza umkhiqizi amathuba ahlukahlukene wokwenza ukukhipha. Ngokukhetha i-solvent ethize, ukukhipha i-hemp kungahle kukhiqizwe ukuze kuhlangatshezwane nemigomo ethile efana nesivuno, ubumsulwa, noma umkhiqizo wokugcina.
Ngemuva kwenqubo yokukhishwa, ama-phyto-compounds wesitshalo se-hemp (isb. I-CBD, i-CBG, amanye ama-cannabinoids ne-terpenes) kufanele ahlukaniswe yi-distillation. Okwe-distillation, ukukhipha okungahluzekile kungenziwa ngokubandayo ebusika ngaphambi kokuba kuqhutshekwe kufinyeleleka kwendlela okufushane noma i-evaporator.
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kwamafutha e-hemp nemithambo ye-CBD
I-Ultrasonic Hemp Amafutha Okhipha
Ama-Hielscher Ultrasonics ahlinzeka ngemishini ekhishwa ngokufaka i-hemp yanoma yisiphi isikali sokukhiqiza. Ama-Ultrasonic hemp akhipha angakhipha uhla oluphelele lwama-cannabinoids nezinye izinto ezibalulekile ze-phyto-compounds ezifana ne-terpenes kusuka esitshalweni se-hemp.
Umhlahlandlela we-Ultrasonic Hemp Extraction
I-Hielscher Ultrasonics inikeza ukusethwa okuhle komkhiqizo wakho wokukhipha i-hemp. Kwisilinganiso sokukhiqizwa esincane nesiphakathi nendawo, ama-Hielscher batch akhipha ukubheja okuphephile kokukhishwa okulula nokusheshayo kwamafutha aphezulu we-CBD.
I-Ultrasonic Batch Extractors ye-Hemp Amafutha
Ngama-UP400St (ama-watts angama-400), uthola isithaseli esinamandla se-ultrasonic, esisebenza kalula kuze kube ngu-approx. 2gal batch ngayinye. Ukusethwa nokusebenza kwe-UP400St kuyashesha futhi kulula futhi kuvumela ukucubungulwa okusheshayo kwezinkomba eziningi eziphindaphindwe kabili ngokulandelana. Isikhathi se-sonication sesikhathi se-2 ggeron beaker ye-hemp slurry ithatha ama-2-5 min. Njengoba ushintsho phakathi kwamabatch lilula futhi lwenziwe ngokushesha, i-UP400St iyakwazi ukucubungula amalitha angama-20 ngehora.
Lesi sithombe ngakwesokudla sibonisa i-ultrasonic hemp extractor UP400St yokukhishwa kwama-cannabinoids anjenge-CBD kusuka ku-hemmp yezimboni ku-8L (1.8gal) beaker. Isishukumisi esisebenza ngomshini ohlangothini lwesobunxele sithuthukisa ukuhamba kwe-macro kwe-slurry yokwelashwa kwe-hemp efanayo.
Uma ufuna isithangami se-ultrasonic esikwazi ukucubungula imiphongolo emikhulu ye-hemp, i- I-UP2000hdT (2000 Watts, bheka i-pic. kwesobunxele) imishini yokulanda i-hemp efanelekile kuwe. Kulula futhi kuphephile ukuyisebenzisa njenge-UP400St, i-UP2000hdT iza namandla e-2000 watts futhi ingaphatha izithasiselo ze-batch kufika kuma-26 gal barrels (ama-120liters) ngokugijima ngakunye.
I-Ultrasonic Inline Extractors ye-Hemp Amafutha
Ngokukhishwa kwe-CBD ngobuchwepheshe obuningi kusuka ezinkulungwini eziningi ze-hemp kwisilinganiso sokuhweba ngokugcwele, ukufakwa kwesithasiselo sangaphakathi kwe-Ultrower kukunika amandla amakhulu okukhiqiza. I-UIP4000hdT iyi-4000 Watts enamandla e-hemp extor, ifakwe nge-flow cell edla i-hemp ngqo enkanjini ye-ultrasonic cavitation, lapho kukhululwa khona ama-cannabinoids kumaseli wesitshalo. Ngokuya ngokuqina kwe-hemp slurry kanye ne-solvent, i-UIP4000hdT ingacubungula kalula kuze kufike ku-2gal / min. Umthamo wokucubungula ungakhuphulwa kalula ngokufaka amayunithi amaningana we-UIP4000hdT ngokufana.
I-UIP16000 iza namandla ayi-16,000 watts kanye ne-processor aze afike ku-22gal / min.
Zonke izithasiselo ze-Hielscher ze-Hielscher zenzelwe futhi zenziwa eJalimane namazinga asezingeni eliphakeme ngokuphelele. Lezi zenzelwe ukusebenza ngo-24/7 ngaphansi komthwalo ophelele, okuqinile, okusebenziseka kalula futhi okuphephile ukusebenza. Izikrini zokuthinta zedijithali, i-automatic data protocolling, kanye nokulawulwa kude kwesiphequluli ngezinye nje zezimpawu ezibalulekile, ezenza ukuthi ama-Hielscher ultrasonors akhiphe i-ultrasonicators ayithandayo yokususa i-hemp kawoyela.
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kawoyela we-hemp ne-CBD ekhishwe nge i-ultrasonicator UP400St
Ikomidi Lezempilo Lenhlangano Yezempilo Lomhlaba Kwezidakamizwa. ICannabidiol (CBD) Umbiko Wangaphambi kokubukeza i-Agenda Item 5.2 nokubukeza kontanga, 2017
Kungani i-Ultrasonic Extraction i-Best Method?
I-plug-and-play - Setha up bese usebenza phakathi namaminithi
Ukukhishwa okuphezulu - Ukukhiqizwa okukhulu kwemali
Ukusebenza okuhambisana nezigaba noma okuqhubekayo
Ukufakwa okulula nokuqala-up
Amakamelo ahambayo / ahambayo - Amakamelo aphathekayo noma akhiwe ngamasondo
Ukulinganisa okulinganayo - engeza enye uhlelo lwe-ultrasonic ngokufana nokwandisa umthamo
Ukuqapha nokulawula kude - nge-PC, ifoni noma ithebulethi ehlakaniphile
Ayikho inqubo yokubheka edingekayo - Setha up bese ugijima
Ukusebenza okuphezulu - okuklanyelwe ukukhiqizwa okungu-24/7 okuqhubekayo
Ikhwalithi ephezulu – yakhelwe futhi yakhiwe eJalimane
Umthwalo osheshayo nokukhipha phakathi kwenkatho
Ilula futhi iphephile ukusebenza
Isizinda esincane se-Solvent-less noma solvent (amanzi, i-ethanol, amafutha yemifino, i-glycerin, njll)
Akukho ukucindezeleka okuphakeme namazinga okushisa
Amasistimu e-explosion-certified aTEX aqinisekisiwe
Kulula ukulawula (futhi ngokulawula okukude)
IHemp Extract vs Hemp Amafutha vs Amafutha Embewu ye-Hemp
Uwoyela we-CBD ungumbhalo ohlanganisiwe ovela kwizimbali ze-cannabis / hemp noma amaqabunga ancibilika kawoyela ophethe i-inert, ikakhulukazi uwoyela odliwayo njenge-MCT, ukhukhunathi, i-sunflower, imbewu ye-hemp, noma i-olive yamafutha. Lapho uwoyela we-CBD ukhishwa emgodini we-hemp plant i-Cannabis sativa, ngakho-ke ibizwa ngokuthi i-hemp extract noma i-hemp oil. Ngokuqhathanisa nesitshalo sensangu (esiphakeme ku-THC futhi siphansi ku-CBD), isitshalo se-hemp yezimboni siqukethe amanani amakhulu we-CBD ngakho-ke sinqunywe kusengaphambili ukuthi kwenziwe ukwenziwa kwe-CBD. Amafutha we-hemp kwesinye isikhathi asetshenziswa ngokumbili kokukhishwa kwe-hemp-based CBD kanye ne-hemp yembewu ye-hemp. Noma kunjalo leyo mikhiqizo yomibili – i-hemp CBD uwoyela ne-hemp yembewu yamafutha – zihlukile kakhulu ekwakhiweni kwazo, imiphumela nasekusetshenzisweni kwazo.
Amafutha embewu ye-Hemp yi-oyela yemifino, etholakala ngokucindezela okubanda kwezimbewu ze-hemp. Imbewu ye-Hemp ayinayo i-CBD, kepha inothile ngamafutha e-omega-3. Amafutha embewu ye-Hemp ungumthombo omuhle wamafutha e-omega-3 wama-imifino nama-vegans futhi asetshenziselwa ukupheka nezimonyo. Amafutha embewu ye-Hemp kufanele afakwe kuhlu njengamafutha embewu ye-cannabis sativa, kuyilapho uwoyela onama-CBD aqukethe njengama-cannabidiol, i-hemp egcwele i-hemp, i-hemp kawoyela, i-phytocannabinoid-rich (PCR) hemp extracts.
Izinzuzo ze-Hemp Extract
I-CBD ibekezelelwa kahle kubantu futhi igcina iphrofayili yokuphepha ephezulu kakhulu. Akukho kuhlukunyezwa noma ukuncika kukhonjisiwe. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi i-CBD inikeza ukwelashwa okuphezulu okungenzeka kube khona okuphathelene nezimo ezahlukahlukene zezokwelapha kufaka phakathi isithuthwane, izimpawu zomqondo, ukukhathazeka, ukudangala, ukuvuvukala, umdlavuza, izifo zenhliziyo, i-neurodegeneration, izimpawu zesifo sokuqina kwesifo somzimba kanye nobuhlungu obungamahlalakhona.
Njengomuthi we-OTC nokungezelela, okokususa i-hemp ne-CBD kusetshenziselwa ukunciphisa ukuvuvukala, ukukhathazeka, izinhlungu (isib. Izicubu nobuhlungu obuhlangene), kanye nokuxhasa amasosha omzimba kanye nenhlala-kahle.
Izithako ze-Hemp Amafutha we-Hemp
Ekhiqizweni kawoyela we-CBD, kungasetjenziswa i-soltiv ehlukahlukene. Ama-solvents ajwayelekile avela kuma-soltiv organic (njenge-ethanol, i-isopropyl alcohol) ezinhlotsheni eziyingozi kakhulu ezifana ne-petroleum-ether, i-naphtha, kanye noketshezi olungejwayelekile (isib. Butane, CO2). Izimo eziqondile nama-solvents asetshenziswayo anomthelela omuhle kwikhwalithi kawoyela ye-hemp, ukunambitheka, umbala, kanye nokubukeka komkhiqizo wokugcina.
Izithako zamafutha e-Ultrasonic hemp zingasetjenziswa ngeezithombisi ezinhlobonhlobo. Ngokuvamile kusetshenziswa ama-soltiv anjenge-ethanol, utshwala, amanzi / i-ethanol, amanzi amsulwa, i-glycerine noma uwoyela wemifino (isib. I-MCT, ukhukhunathi, imbewu ye-hemp noma uwoyela we-olive). Lokhu kunikeza isizinda se-LGD se-LGD inzuzo ebaluleke kakhulu yokusebenzisa i-soltiv engenabungozi.
Isizinda se-Ultrasonic – Imiphumela yeCavitational
Lapho amandla amaza e-ultrasound eyimibhangqwana ibe uketshezi (isb. Ukumiswa okuqukethe izinto ze-botanical ku-solvent), amagagasi e-ultrasonic ahamba oketshezi abangela ukushintshana kwemijikelezo ephezulu yengcindezi / yengcindezi ephansi. Ngesikhathi semijikelezo enengcindezi ephansi, kudalwa amabhamuza we-vacuum (okuthiwa ama-bubble cavitation), akhula ngaphezu kwemijikelezo eminingana yengcindezi. Ngosayizi othile, lapho amagwebu engakwazi ukumunca amandla athe xaxa, agxumagxuma ngamandla ngesikhathi somjikelezo wokucindezela okukhulu. I-bubble implosion ibonakala ngamandla amakhulu wokufaka amandla, kufaka phakathi ama-micro-turbulences nemifudlana engamanzi enama-velocities angafika ku-100m / s. Le miphumela ye-cavitational shear yaziwa nangokuthi imiphumela ye-sonomechanical. Isizinda se-Ultrasonic sama-molecule we-bioactive ikakhulu sibangelwa yimiphumela ye-sonomechanical: ukuthuthuka nokuxokozela kuphazamisa amaseli futhi kukhuthaze ukudluliswa okukhulu. Lokhu kusho ukuthi ama-molecule we-bioactive afana ne-polyphenols, terpenes, amafutha abalulekile nama-cannabinoids akhishwa kwisitshalo se-matrix sesitshalo esiya ku-solvent.